'Furiosa,' 'Mad Max' Ntinye, Setịpụrụ ịmalite mingse ihe nkiri na New South Wales
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Furiosa,' 'Mad Max' Ntinye, Setịpụrụ ịmalite mingse ihe nkiri na New South Wales
Akụkọ Ntụrụndụ ụjọIhe nkiri egwu
edere ya Waylon Jordan April 19, 2021
Na-ewe iwe, Ọhụrụ Mad Max ihe nkiri na mbido akụkọ nke ewu ewu site na Mad Max: oké iwe Road, nọ na nkwadebe ikpeazụ iji malite eserese na New South Wales, Australia. Ihe nkiri a ga-abụ nnukwu ihe emere na Australia.
Anya Taylor-Joy (Ndị New Mutants, The Witch) ga - ewere ọrụ dị mkpa nke na - esochi Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok). Hemsworth pụtara na onye okike aha ya bụ George Miller na nnọkọ ogbako taa iji kwuo maka atụmatụ maka ọrụ ahụ nke edobere na June 23, 2023.
Ihe nkiri a gha egosi $ 350 million AUD na mpaghara a ma meputa ebe n'agbata oru 850.
Mad Max: oké iwe Road bụ ihe nkiri dị egwu nke nwetara ihe karịrị $ 370 nde n'ụwa nile, isi isiokwu a atụ anya nke ọma nwere ike ịme nke ahụ na ndị ọzọ. Charlize Theron dị ka Imperator Furiosa bụ otu n'ime ndị pụtara ìhè na ihe nkiri ahụ, ọ ga-atọkwa ụtọ ịmụ akwụkwọ azụ ya.
Onye nduzi ahụ kwupụtara na onye nrụpụta ihe na nkwụsi ike na Warner Bros. bụ isi maka ọganiihu ọrụ ahụ.
“Kemgbe anyị malitere iwe Road Echere m na e nweela usoro ọchịchị isii dị iche na Warner Bros, ”ka o kwuru. "Ugbu a, ọ na-ahụ si nnọọ ike na ha na-enwe ike ihu ọma ntị coherently na fim ha chọrọ ime na nke a bụ otu n'ime ha."
Dịla njikere maka isi ọzọ na Mad Max saga? Chọrọ ịmụtakwu banyere Na-ewe iwe? Nọrọ na-ege ntị na iHorror maka akụkọ kachasị ọhụrụ ka ọ bịara dị!
AHỤTA: n'obi imecha
Anya Taylor-JoyChris HemsworthNa-ewe iweGeorge MillerMad MaxWaylon Jordan
Nyochaa: 'ysmụ nwoke Si Na Hel' na-ebuli Ego Ndị Ahụ na Lamp Vampire Ọhụrụ
Lovehụnanya, Ọnwụ + Rọbọt Mpịakọta 2 Trailer bụ Ebe a ịfụ uche gị